UGAAR AH RAGGA: Xaas Wanaagsan Ayaad Heshay Haddii Ay Leedahay Sifooyinkaan | Aayaha
Aayaha editorSeptember 23, 2020
Way adagtahay in la helo xaas wanaagsan waqtigaan la joogo. Laakiin ragga qaar ayaa nasiib u yeeshaan inay helaan xaasas wanaagsan.
Xaaska wanaagsan waxay leedahay tilmaamo cajiiba oo qurux badan kuwaas oo aad hoos ka akhrisan karto.
1. Haweeneyda aanan kaa tagin xittaa marka aadan awoodin inaad bixiso waxyaabaha ay u baahantahay waxay leedahay dhammaan sifooyinka lagama maarmaanka u ah xaas wanaagsan. Waxay fahamsantahay inaadan awood u lahayn inaad fuliso rabitaankeeda xilligan, laakiin uu imaan doono waqti aad awoodi doontaa inaad bixiso.
Way ogtahay in adiga oo ay xaaladaas kaaga tagtaa inay tahay dambi iyo sharaf dhac bini aadanimo.
2. Gabadha mudnaan kaa siiso dadka kale kuna dadaasho farxadaada, waa xaas wanaagsan.
3. Haweeneydu waa xaas wanaagsan haddii ay ogtahay in masuuliyadeeda aysan ahayn kaliya inay cunto kuu kariso balse ay sidoo kale kaa caawiso kaana taageerto sidii aad uga bixi lahayd culeysyada kusoo wajaho.
4. Haweeney garaneysa masuuliyadeeda waa xaas wanaagsan.Waxay sidoo kale caruurtaada u noqotaa hooyo wanaagsan. Adigana way ku daryeeshaa.
5. Xaaska wanaagsan waa haweeney garaneysa cuntada aad u jeceshahay iyo sida loo diyaariyo. Waxay hubisaa in calooshaadu buuxdo mar walba. Waxay sidoo kale hubisaa inaad hesho cunto isku dheellitiran.
6. Xaaska wanaagsan waxay ogtahay in nolosha guurku aysan ahayn caqabad la’aan. Way ka warqabtaa in caqabado ay imaanayaan isla markaana caruur yeelashadu ay tahay masuuliyad dheeraad ah oo u baahan ilo badan. Waxay ka fekertaa caqabadaha dhaqaale.
7. Xaaska wanaagsan lama barbar dhigto ninkeeda ragga kale. Waa haweenay og inay dadku kala duwan yihiin, qof walbana uu leeyahay awood iyo daciifnimo. Waxay kugu qaadataa qofkaad tahay.
8. Xaaska wanaagsan ma ahan haween hadal badan. Marwalba kama hadasho xumaanta ninkeeda mana ka xanaajiso.
Way ogtahay in hadalladeedu ay xanuun badan yihiin sidaa darteed, uma bandhigto daciifnimada ninkeeda asxaabteeda.
9. Xaaska wanaagsan waxay leedahay faham. Waxay leedahay xaalado kala duwan markaad faraxsantahay iyo markaad murugooto. Waxay leedahay xaalado kala duwan markaad faraxsantahay iyo markaad murugeysantahay. waxay la timaaddo qaabab ay kugula dhaqanto labada xaaladoodba.